Home > Products > မိုးညှင်းခရိုင် > မိုးညှင်းမြို့နယ် > ဟိုပင်မြို့
၁။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာ ရေး၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေးဟူသော ရည်မှန်း ချက် တာဝန်များကို အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည့် အဆင့်ဆင့် သော အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများသည် ရုံးချုပ်အဆင့်မှ အောက်ခြေ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အထိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာန ရုံးအသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရပြီး နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ချောမွေ့စွာလည်ပတ်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ကြီး ဌာန၏ရည်မှန်းချက် တာဝန်များ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးအပ်သောတာဝန် များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့များမှပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြရသည်ဖြစ်ရာ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက် များ ပြုစုထားရှိခြင်းသည် များစွာအရေးပါလာပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြုစုခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသကဲ့သို အကြီးအကဲများ နယ်မြေသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင် နယ်မြေ၏အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ဟိုပင်မြို့၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၂၀၁၇ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်ထိအခြေအနေ)ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှပေးပို့ သော ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အညီ ပြုစုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂။ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၄၀-၁၂၄၇ခုနှစ်အတွင်း အထက်မြန်မာပြည်၌ သီပေါမင်းစိုးစံစဉ်ကာလ မိုးညှင်းမြို့နယ်စော်ဘွားကြီး ကွယ်လွန်ပြီး နောက် ဗြိတိသျှအစိုးရလက်ထက်တွင် အမတ်ကြီးဦးအေးဆိုသူက ဆက် လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမတ်ကြီးဦးအေး ကွယ်လွန် ပြီးနောက် ဝန်းသို တရုတ်အမျိုးအနွယ် ဦးဖိုးလန်းဆိုသူ၏အုပ်ချုပ်မှုကို မကျေနပ်သဖြင့် ဦးချို ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု(၇)စုခန့်သည် ၁၂၅၈ခုနှစ်၊ ကဆုန် လဆန်း(၆)ရက်နေ့တွင် ဟိုပန်လွင်ပြင်ကြီး စွန်ဦးခေါင်းဒေသကို စတင် တည်ထောင်အခြေချခဲ့ပါသည်။ နောင်တွင် ဟိုပင်ဟူ၍ခေါ်ဝေါ်လာသည်။ လူအများက “ ဦးချိုမြရှင်ထိန်း ဟိုပင် ”ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်လာကြ သည်။ဟိုပင်မြို့နယ်ခွဲသည် မြို့နယ်ခွဲမဖွဲ့မှီ ဟိုပင်ဒေသတွင် ဟိုပင်အပါ အဝင် ကျေးရွာအုပ်စု(၉)အုပ်စုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး မိုးညှင်းမြို့နယ်မှ တိုက်ရိုက်စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်ခွဲ ဖွဲ့စည်းသည့်အခါ ဟိုပင် ကို ရပ်ကွက်(၄)ရပ်ကွက် ဖွဲ့စည်းပြီး ကျန်ကျေးရွာအုပ်စုများကို မူလ အတိုင်းထားရှိပြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်း၍ ( ယခုရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ) လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏(၂၂.၇.၂၀၀၂)ရက်စွဲ ပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀၀/ ၂၂-၂၃၀/ ဦး ၁ အရ ဟိုပင်မြို့နယ်ခွဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏(၂၂.၅.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၁၁/၂၀၁၄) အရ မြို့နယ်ခွဲ စကားပယ်ဖျက်ခြင်း ကြောင့် ဟိုပင်မြို့ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
၃။ ဟိုပင်မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိ၍ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဟိုပင်မြို့သည် ‌မြောက် လတ္တီတွဒ် ၂၄ ဒီဂရီ ၂၉မိနစ်နှင့် ၂၅ဒီဂရီ ၂၇မိနစ်ကြား၊ အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ၂၄မိနစ် နှင့် ၉၆ဒီဂရီ ၄၈မိနစ် အကြားတွင် တည် ရှိပါသည်။ ဟိုပင်မြို့နှင့် ရပ်ကွက်များ၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်/ ဧက
၁၁.၇၆ စတုရန်းမိုင်/ ၇၅၂၆ ဧက
၄။ ဟိုပင်မြို့၏အရှေ့ဘက်တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင် ဆင်ဘိုမြို့၊တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တွင် မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးညှင်းမြို့ နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် မိုးညှင်းခရိုင်၊ မိုးကောင်းမြို့နယ် နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက် ရှိပါသည်။
၅။ ဟိုပင်မြို့အတွင်း အရှေ့ဘက်တွင် ဂန့်ဂေါတောင်တန်း၊ အနောက် ဘက်တွင် နန့်ရုံတောင်ကြော တည်ရှိပြီး ၎င်းတို့အကြား အလျား(၁၁)မိုင်၊ အနံပျမ်းမျှ(၃)မိုင်(၄)ဖာလုံရှိသော မြေပြန့်လွင်ပြင်ရှိပါသည်။ ဂန့်ဂေါ တောင်တန်းသည် နန့်ရင်းချောင်းအခြေမှစတင်၍ အ​ရှေ့ဘက်သို့ တဖြည်း ဖြည်းမြင့်တက်လာရာ(၄၂၁၇)ပေရှိ၍ ဟိုပင်မြို့တွင် အမြင့်ဆုံးတောင်တန်း ဖြစ်ပြီး ဟိုပင်မြို့၏အရှေ့ဘက်နှင့် မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်အစပ် ကောက်ကွေ့ ချောင်းအထိတဖြည်းဖြည်း နိမ့်ဆင်းသွားပါသည်။ ဟိုပင်မြို့အတွင်း အနိမ့် ဆုံးတောင်မှာ အမြင့်ပေ(၁၃၂၅)ပေရှိသော နန့်ရုံတောင်ကြော ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ဟိုပင်မြို့တွင် မြစ်ချောင်းများ နည်းပါးသည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြစ်ချောင်းများသည် တောင်မှမြောက်သို့ စီးဆင်းလျက် ရှိပါသည်။ ထင်ရှားသောချောင်းမှာ နန့်ရင်းချောင်းဖြစ်ပြီး ဟိုပင်မြို့၊ နန့်ရင်းကျေးရွာ အနီးမှ ဖြတ်၍ တောင်မှမြောက်သို့ စီးဆင်းပါသည်။
၇။ ဟိုပင်မြို့သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပျှမ်းမျှအမြင့် (၆၃၆)ပေအထက်တွင်တည်ရှိပါသည်။အမြင့်ဆုံးတောင်မှာ ဂန့်ဂေါ တောင်တန်းဖြစ်ပြီး အမြင့်ပေ(၄၂၁၇)ပေ ရှိသည်။ အနိမ့်ဆုံးတောင်မှာ နန့်ရုံတောင်ကြောဖြစ်ပြီး အမြင့်ပေ(၁၃၂၅)ပေ ရှိသည်။
၈။ ဟိုပင်မြို့သည် ပူအိုက်စွတ်စိုသောရာသီဥတုရှိပြီး ၊ အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ( ၃၉.၀ .c)နှင့်အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ ( ၁၆.၀ .c) ဖြစ်ပါသည်။ နှစ် အလိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မိုးရေချိန်နှင့်အပူချိန်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ဆောင်းရာသီ ( .c)
၉။ ကျွန်း၊ ပိတောက်၊ သင်္ကန်း၊ ကညင်၊ ကုက္ကိုလ်၊ စကားဝါ၊ တောင်တမာ၊ ပျဉ်းမ၊ ဖန်းခါး၊ ယင်းမာ၊ ယမနေ၊ ကံ့ကော်၊ ကြေးလံ၊ မျောက်ငို၊ လက်ခုပ်၊ သစ်ဖြူ၊ ခပေါင်း၊ လက်ပံ၊ တောင်သရက်စသည် သစ်မျိုးစိတ်(၈၀)ခန့် ပေါက်ရောက်ပါသည်။
၁၀။ - - -
၁၁။ - - -
၁၂။ - - -
အဆောက်အဦး ပျက်စီးမှု အရေအတွက်
၁၄။ ဟိုပင်မြို့တွင်နေထိုင်ကြသောလူမျိုးစုများမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
၁၅။ ဟိုပင်မြို့၏၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလကုန်အထိ လူဦးရေမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါ သည်-
၁၆။ ဟိုပင်မြို့၏၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလကုန်ထိ လူဦးရေ တိုးနှုန်းနှင့် ကျားမအချိုးမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
၁ : ၁.၁၆
​ပြောင်း ထွက် ဦးရေ
၁၇။ ဟိုပင်မြို့တွင်နေထိုင်ကြသူများ၏ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ အလိုက်လူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၁၈။ ဟိုပင်မြို့အတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ နေထိုင်သူဦးရေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၁၉။ ဟိုပင်မြို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖွဲ့စည်းမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
၂၀။ ဟိုပင်မြို့၏ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား မိုးညှင်းမြို့ နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
(က) မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေ ဟိုပင်မြို့၏၂၀၁၇ခုနှစ်တွင်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေ မှာကျား(၆၉၀၀)ဦး၊မ(၈၃၀၇)ဦး၊စုစုပေါင်း(၁၅၂၀၇)ဦး ရှိပါသည်။
(ခ ) နိုင်ငံရေးပါတီများ
ပြည်ထောင်စုကြံခိုင် ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၁။ ဟိုပင်မြို့သည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တည်ရှိပြီး စီးပွားရေး အရ အချက်အခြာကျသော မြို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဟိုပင်မြို့အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူလူထုသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း/ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ကို အဓိကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဟိုပင်မြို့သည် ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနား ပြည်ထောင်စုကားလမ်းမကြီးနှင့် မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား မီးရထားလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိ၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်း မွန်သော မြို့ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုပင်မြို့၏အဓိကထွက်ကုန်မှာ ဆန်စပါး ဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချ ပါသည်။
၂၂။ မြေအသုံးချမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၂၃။ ဟိုပင်မြို့ရှိ ဆည်မြောင်းတာတမံများနှင့် ဆည်ရေသောက် ဧရိယာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
ဆည်ရေ သောက် ဧရိယာ (ဧက)
<![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]><![if !supportMisalignedRows]><![endif]>
၂၄။ ဟိုပင်မြို့၏စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
(ခ) နှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျိုးမှု အ‌ခြေအနေ
−−−−−−−− မရှိပါ −−−−−−−−−
လက် တွန်း ထွန်
ရိတ် သိမ်း စက်
အလေအလွင့် နှင့် အခြား
၂၅။ ဟိုပင်မြို့၏ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေအနေ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ကြက်ဆင် (ဘဲငန်း၊ မန်ဒါလီ)
(ဂ) မြို့ အသားထုတ်လုပ်မှု(ပိဿာ)
(ဃ) မြို့ ကြက်/ ဘဲ/ ငုံး ဥထုတ်လုပ်မှု (လုံး)
(င) မြို့ နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု
(စ) မြို့ ငါး၊ ပုဇွန်မွေးမြူမှု အခြေအနေ
လေလံ အရေ အတွက်
ထုတ် လုပ်မှု (တန်)
၂၆။ ဟိုပင်မြို့၏ စက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အခြေ အနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၂၇။ မြို့၏ သစ်တောလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက် များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
------ မရှိပါ --------
၂၈။ တင်ပြရန် မရှိပါ။
၂၉။ ဟိုပင်မြို့၏ စွမ်းအင်/လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ရရှိ/ဖြန့်ဖြူးသည့် ဓါတ်အား (KW)
၆၆/၃၃ ခွဲရုံ၊အင်းတော်ကြီး ၊နန့်မွန်း၊ ဟိုပင်၊ ပင်းဘော
၁၀၀၀ KW / ၂၅၀ KW
၅၀၀ KW / ၁၉၀ KW
(စ) ထရန်စဖော်မာ အရေအတွက်
500 KVA၊ မြို့မတောင်
0.2 MGW မဂ္ဂါဝပ်
100 KVA၊ မြို့မတောင်
0.04 MGW မဂ္ဂါဝပ်
160 KVA၊ မြို့မမြောက်
0.06 MGW မဂ္ဂါဝပ်
150 KVA၊ မြို့မမြောက်
0.02 MGW မဂ္ဂါဝပ်
315 KVA၊ မြဇေယျာ
0.1 MGW မဂ္ဂါဝပ်
200 KVA၊ မြသီတာ
0.08 MGW မဂ္ဂါဝပ်
100 KVA၊ မြသီတာ
၃၀။ ဟိုပင်မြို့၏ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည်-
(ဂ ) ရထားလမ်းနှင့် ဘူတာရုံများ
ရထား လမ်း အမည်
၁၁ မိုင် ၂ ဖာလုံ
​ရွှေညီကို မော်ယာဉ် အသင်းဂိတ်
ဟိုပင်- အင်းတော် ကြီး- ဆည်ဇင်း
ဖိုးဝှီး၊ပါဂျဲရိုး၊ ပရိုဘောက်၊ ကန်စတန်၊လိုက်ထရပ်၊ဂျစ်၊ ကင်ဒါ
ဟိုပင်-​ ဝှေခါ -ဖားကန့်
၇ မိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ၈ မိုင်တောင်ခြေရွာ
မြို့သစ်ကလေး ကျေးရွာ၊ မိုင်တိုင် အမှတ်(၁၁)
တည် နေ ရာ
(က) ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနား ပြည်ထောင်စုကားလမ်း
ငါးမိုင်နှင့် နန့်ခွင်ရွာ ကြား
ပေ(၅၀)မှ (၁၈၀)ရှိ တံတားအမည်
သွားလာ နိုင်သည့်ယာဉ် (ကား/ရထား)
အောက် တံတား အရေအတွက်
(ခ) ဟိုပင်-ကုန်းသာ -လုံးတုံ-ညောင်ပင်လမ်း
ရွှေဘို- မြစ် ကြီးနားလမ်း
၃၂။ ဟိုပင်မြို့ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက် သော အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-